ROM 14 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (ROM 14)
Nabatanụ ụmụnna ndị akọnuche ha na-esogbu ma ha soro ndị ọzọ okwukwe ha siri ike mee ihe ha na-eme. Unu ekwujọla ha, nꞌihi na ụzọ ha si ele ihe anya abụghị ụzọ unu si ele ya.
Nꞌihi na, dị ka ịma atụ, ọ dị ndị okwukwe ha siri ike, ndị kweere na ha nwere ike iri anụ ọ bụla. Ọ dịkwa ndị ọzọ okwukwe ha na-esighị ike ndị na-eri nanị ahihia nri.
Onye ka ị bụ i ji na-ekpe odibo onye ọzọ ikpe? Onye ọ dịrị ikpebi ma odibo ya ọ na-emezi emezi ma ọ dịghị emezi bụ nna ya ukwu. Ma odibo ahụ aghaghị iguzosi ike nꞌihi na Onyenwe anyị pụrụ ime ka o guzosie ike.
E nwekwara ụfọdụ ndị Kraịst ndị na-eche na ọ dị otu ụbọchị dị nsọ karịa ụbọchị ndị ọzọ, ma ndị ọzọ na-eche na ụbọchị nile bụ nke Chineke. Nꞌụdị okwu dị otu a, ọ dị mma ka onye ọ bụla kpebiere onwe ya.
Ọ bụghị anyị ka ọ dịrị ikpebi ma anyị ga-adị ndụ ma ọ bụ na anyị ga-anwụ. Ọ bụ nanị Chineke ka ọ dịrị ime ka anyị dị ndụ. Ọ bụkwa ya ga-eme ka anyị nwụọ.
Ọ bụ nꞌihi nke a ka Kraịst ji nwụọ, biliekwa, ka ọ bụrụ Onyenwe anyị nꞌọnọdụ ọ bụla anyị nọ, ma ọ bụ na ndụ, ma ọ bụ nꞌọnwụ.
Ya mere, o kwesịghị ka i kwujọọ nwanna gị. O kwesikwaghị ka i leda ya anya. Nꞌihi na anyị nile nꞌotu nꞌotu ga-eguzo nꞌihu oche ikpe Chineke nꞌụbọchị ahụ ọ ga-ekpe ụwa ikpe.
Nꞌihi na Chineke kwuru nꞌakwụkwọ nsọ sị, “Ebe m na-adị ndụ, mmadụ nile nꞌotu nꞌotu aghaghị igbu ikpere nꞌala nye m. Mmadụ nile ga-ekwupụtakwa mmehie ha nꞌihu m.”
Ee, anyị nile nꞌotu nꞌotu ga-aza ajụjụ banyere ndụ anyị nꞌihu Chineke.
Ma nꞌụche m, ana m ekwukwa ya nꞌihu Onyenwe anyị Jisọs, o doro m anya na nri ọ bụla adịghị nke mmadụ na-ekwesịghị iri. Kama ọ bụrụ na onye ọ bụla ekpebie na ụfọdụ nri adịghị mma oriri, nri dị otu a bụụrụ onye ahụ nri na-adịghị ọcha.
Ọ bụrụkwa na ihe ị na-eri na-ewute nwanna gị, ị naghị egosi na ị hụrụ ya nꞌanya ma ị gaa nꞌihu nọgide na-eri ihe ahụ. Ekwela ka nri ị na-eri bụrụ ihe gaewetara nwanna gị ịla nꞌiyi, nꞌihi na cheta na ọ bụkwa nꞌihi ya ka Kraịst ji bịa nwụọ.
A sịkwarị na ihe ị na-eme dị mma, emela ya, ma ọ bụrụ na ọ ga-eme ka ndị ọzọ kwujọọ gị.
Emebila ọrụ Chineke rụrụ nꞌihi ihe oriri. Cheta na nri nile dị ọcha dịkwa mma, ma erila nke ọ bụla ga-eme ka mmadụ mee mmehie.
Ma onye ahụ maara na ihe ọ na-achọ ime bụ ihe ọjọọ ekwesịghị ime ya. Nꞌihi na ọ bụrụ na onye ahụ emee ya, ọ bụụrụ ya mmehie. Nꞌihi na ihe ọ bụla na-esiteghị nꞌokwukwe bụ mmehie.